Iindaba -Ukusetyenziswa kweklinikhi kwegqabi leMibberry kwi-fatty syndrome yokubeka iinkukhu
1 Injongo: Ngokwezifundo, igqabi le-Mulberry likhupha inkxaso lisusa umlilo wesibindi ekuphuculeni ukubona kwamehlo, ukuhlengahlengisa uxinzelelo lweswekile esegazini, ukulawula imetabolism yeswekile kunye nokugcina isibindi esisempilweni.
Oluvavanyo lokuqinisekiswa kwesicelo seklinikhi lwenziwa ngokukodwa kwiqela lokubeka iinkukhu ezineempawu ezinamanqatha ukubonisa ubungqina bokusebenza okukukhankanywe apha ngasentla.
3. Indawo: KwiGuangdong XXX Agricultural Technology Co, Ltd. (indlu yenkukhu: G30, iBatch: G1904, uSuku-ubudala: 535-541) ukusuka nge-23 ukuya kwi-29 Septemba, 2020.
4. Iindlela:I-50,000 yokubeka iinkukhu ezine-fatty syndrome zikhethwe kwiintsuku ezisi-7 zilandelelana zamanzi okusela kunye nokongezwa kwe-DNJ (0.5%) 100g / itoni yamanzi, kugxila ukutya kweeyure ezi-6 ngosuku lokutya amanzi (1kg / ngosuku), ukugcina nokurekhoda Isalathiso sokusebenza kwemveliso yokufuya iinkukhu. Ulawulo lokondla njengokulawulwa kwesiqhelo kwendlu yenkukhu kwaye akukho zinye iziyobisi ezongezwe ngeli xesha lokulinga.
5 .Iziphumo zovavanyo: Itheyibhile 1
Isigaba seMveliso Umyinge wokubeka ixabiso Umgangatho weqanda ongafanelekanga% Ubungakanani beqanda, g / iqanda Inani eliphakathi lokufa kusuku lweentsuku
Iintsuku ezingama-20 ngaphambi kovavanyo
Iintsuku ezisi-7 ngexesha lokulinga
Iintsuku ezingama-20 emva kovavanyo
Itafile yesi-2 Imeko yokufa yemihla ngemihla ngaphambi nasemva kokunyanga okunamafutha isifo sesibindi esikhutshwe ngegqabi leMbhabheli
Emva konyango （1-7day）
Emva konyango （8-14D）
1 Table iziphumo zibonisa ukuba: iziphumo kwiTheyibhile 1 zibonisa ukuba
5.1 Amanzi okusela kunye nokongezwa kwegqabi leMbholabhini elikhupha i-100g / itoni yamanzi (okanye i-200g / itoni yokondla) inefuthe elibalulekileyo lokukhusela isibindi, linokunciphisa ngokukhawuleza ukusweleka okubangelwa sisifo sesibindi esinamafutha ngaphandle kwesiphumo sokutya kunye nobunzima beqanda.
Iingcebiso: Ukuze kuncitshiswe ukonakala kwesibindi ngokutya okuphezulu kwamandla, i-lipid esezantsi kunye nevolumu yokufaka iiprotein, yonyusa idosi ye-bran ekondleni kwasekuqaleni kucetyiswa.
Isicatshulwa segqabi le-Mulberry 5.2 sinokulawula ngokufanelekileyo ukwehla kwenqanaba lokubekwa okubangelwa sisibindi esinamanqatha. Ngenxa yokuqhubela phambili kwesi sifo ngexesha lonyango, iqondo lokubeka ngakumbi liyehla; Emva konyango, ireyithi yokubeka inyuswe kakhulu, inyuke nge-4.1% xa kuthelekiswa nenqanaba lonyango kwaye inyuke nge-1.5% xa kuthelekiswa nenqanaba ngaphambi konyango.
5.3 Emva konyango olukhutshwe ngamagqabi e-mulberry, ubunzima beqanda bonyuke kancinci nge-0.3g / pc xa kuthelekiswa nobunzima ngaphambi konyango
5.4 Ngenxa yeemfuneko zendlu yenkukhu yokushicilela iikhowudi kumaqanda, ukhetho lweqanda luqinile, inqanaba leqanda elingafanelekanga lenyukile.
Kungagqitywa ngaloo ndlela:Ngokudityaniswa kokumiselwa kokuxinana kwezondlo, i-mulberry leaf extract inokulawula isibindi esinamafutha ekubekeni iinkukhu ngokufanelekileyo, kwaye kunciphise kakhulu izinga lokufa, kwandise imveliso, kuphakamisa ubunzima beqanda; Ukukhupha igqabi le-mulberry kunefuthe elibonakalayo lokunyanga isifo sesibindi esinamafutha, kufanelekile ukuba isetyenziswe ngokubanzi. Esinye isifo se-hepatic, ukuqinisekiswa okungakumbi kweklinikhi kuyadingeka.
Umfanekiso we-Anatomy ekuqaleni